1.Neiko mhuri dzakasimba dzichikosha munzanga yavanhu?
MHURI iboka rekaresa pasi pano, uye inoita basa rinokosha munzanga yavanhu. Munhau yose, mhuri dzakasimba dzakabetsera kuita nzanga dzakasimba. Mhuri ndiyo gadziriro yakanakisisa yokurera vana kuti vave vakuru vakakura zvakakwana.
2-5. (a) Rondedzera chengeteko iyo mwana anonzwa mumhuri inofara. (b) Zvinetsoi zvinoshumwa mudzimwe mhuri?
2 Mhuri inofara inzvimbo yekotsekano nechengeteko. Isa muchiono mhuri yakanaka kwechinguvana. Mukati mechirariro chavo, vabereki vanoitira hanya vanogara navana vavo ndokukurukura zviitiko zvezuva racho. Vana vanotaura namanyemwe sezvo vanoudza baba vavo naamai pamusoro pechaitika kuchikoro. Nguva inonyaradza inopedzerwa pamwe chete inozorodza munhu ari wose nokuda kwerimwe zuva vari kunze kwemhuri.
3 Mumhuri inofara, mwana anoziva kuti baba vake kana kuti amai vachamutarisira apo anorwara, zvichida kuita madzoro parutivi pomubhedha wake usiku hwose. Iye anoziva kuti anogona kuenda kuna amai vake kana kuti baba nezvinetso zvoupenyu hwake huduku ndokuwana zano netsigiro. Hungu, mwana anonzwa akakotsekana, pasinei zvapo nokuti nyika iri kunze ingave yakazadzwa sei nezvinetso.
4 Apo vana vanokura, vanowanzoroora kana kuti kuroorwa ndokuva nemhuri yavo vamene. “Munhu anoziva kuti anofanira kuonga sei vabereki vake apo anova nomwana wake amene,” chinodaro chimwe chirevo chokuMabvazuva. Vane pfungwa huru yokuonga norudo, vana vakura vanoedza kuita kuti mhuri dzavo vamene dzifare, uye vanotarisirawo vabereki vavo zvino vokwegura, avo vanofara muboka ravazukuru.
5 Zvichida panguva ino uri kufunga, kuti: ‘Eya, ndinoda mhuri yangu, asi haina kufanana neichangobva kurondedzerwa. Mukwanyina wangu neni tinoshanda panguva dzakasiyana uye hatiwanzoonana. Tinotaura zvikurukuru pamusoro pezvinetso zvemari.’ Kana kuti unoti here, ‘Vana vangu navazukuru vanogara mune rimwe taundi, uye ini handitongovaoni’? Hungu, nokuda kwezvikonzero zvisingawanzogona kudzorwa naavo vanobatanidzwa, upenyu hwemhuri hwakawanda hahuna kunaka. Zvisinei, vamwe vanorarama upenyu hwemhuri hunofadza. Seiko? Pane chakavanzika chomufarwa wemhuri here? Mhinduro ndihungu. Asi tisati tachikurukura, tinofanira kupindura mubvunzo unokosha.
6. Rudzii rwemhuri ichakurukurwa mubhuku rino?
6 Munyika dzokuMadokero, mhuri zhinjisa dzinoumbwa nababa, amai, uye vana. Vanasekuru vangagara mumhuri dzavo vamene kwenguva refu yavanogona. Nepo kurukurirano ichichengetwa nehama dzokunyama dzisiri dzapedyo zvikuru, mitoro kune idzodzi yakaganhurirwa. Zvikurukuru, iyi ndiyo mhuri yatichakurukura mubhuku rino. Zvisinei, dzimwe mhuri dzazova dzinozivikanwa navose nenzira inowedzera mumakore achangobva kupfuura—mhuri ine mubereki mumwe, mhuri yokurera, uye mhuri ine vabereki vasingagari pamwe chete nokuda kwechikonzero chakati.
7. Chii chiri mhuri yakatambanudzwa?
7 Inozivikanwa navose mudzimwe tsika ndiyo mhuri yakatambanudzwa. Muiyi gadziriro, kana kuchibvira, vanasekuru vanotarisirwa nenzira ine nhevedzano navana vavo, uye kusanobatana nemitoro zvinotambanukira kuhama dzokunyama dzisiri dzapedyo. Somuenzaniso, mitezo yemhuri ingabetsera kutsigira, kurera, uye kunyange kubhadharira dzidzo vazukuru vechikadzi vavo, vazukuru vechirume, kana kuti hama dzokunyama dzisiri dzapedyo zvikuru. Nheyo dzichakurukurwa muchinyorwa chino dzinoshanda kumhuri dzakatambanudzwa.
8, 9. Zvinetsoi mudzimwe nyika zvinoratidza kuti mhuri iri kuchinja?
8 Nhasi mhuri iri kuchinja—kunosuruvarisa kutaura, kwete nokuda kwezviri nani. Muenzaniso unoonwa muIndia, umo mudzimai angagara nemhuri yomurume wake ndokushanda mumusha achitungamirirwa nehama dzomurume wake. Mazuva ano, kunyange zvazvo zvakadaro, hakusi kwechienzi kuti vadzimai vechiIndia vatsvake basa kunze kwomusha. Bva ivo sezviri pachena vachiri kukarirwa kuita mabasa avo egamuchidzanwa mumusha. Mubvunzo unomutswa munyika dzakawanda ndouyu, Achienzaniswa nemimwe mitezo yemhuri, mukadzi ane basa rokunze anofanira kukarirwa kuita basa rakawanda sei mumusha?
9 Munzanga dzokuMabvazuva, zvisungo zvakasimba zvemhuri yakatambanudzwa ndezvemagamuchidzanwa. Zvisinei, mupesvedzero yomuraramiro wokuMadokero wokuti munhu anozviraramira oga nedzvinyiriro yezvinetso zvemari, mhuri yakatambanudzwa yemagamuchidzanwa iri kuneta. Vakawanda, naizvozvo, vanorangarira kutarisirwa kwemitezo yemhuri yakwegura somutoro panzvimbo pebasa kana kuti ropafadzo. Vamwe vabereki vakwegura vanobatwa zvisina kufanira. Zvirokwazvo, kubatwa zvisina kufanira nokuregeredzwa kwavakwegura zvinowanwa munyika dzakawanda nhasi.
10, 11. Maidii anoratidza kuti mhuri dziri kuchinja munyika dzeEurope?
10 Chatanuro iri kuva inozivikanwa navose nenzira inowedzera. MuSpain mwero wechatanuro wakakwira kusvikira ku1 muroorano 8 pakasvika mavambo amakore gumi okupedzisira ezana ramakore rechi20—wedzero huru kubva pa1 mu100 makore 25 chete akapfuura. Sezvinoshumwa, Britain ine mwero wechatanuro wakakwira zvikurusa muEurope (4 muroorano 10 dzinokarirwa kukundikana), yakaona wedzero yakamwe kamwe munhamba yemhuri dzine mubereki mumwe.
11 Vakawanda muGermany vanoratidzika kuva vari kurega chose chose mhuri yegamuchidzanwa. Ma1990 akava ne35 muzana yemhuri dzose dzeGermany dzakaumbwa nomunhu mumwe uye 31 muzana dzakaumbwa navanhu vaviri chete. Vagari veFrancewo vari kuroora kana kuti kuroorwa kazhinji zvishoma, uye avo vanoroora kana kuti kuroorwa vanochatanura kazhinji kazhinji zvikuru uye nokukurumidza zvikuru kupfuura zvaisiitika. Nhamba dzinokura dzinosarudza kugara pamwe chete pasina mitoro yeroorano. Zvimiro zvendangariro zvakaenzana zvinoonwa munyika yose.
12. Vana vanotambura sei nemhaka yechinjo dziri mumhuri yazvino uno?
12 Zvakadiniko navana? MuUnited States nedzimwe nyika dzakawanda, vakawanda zvikuru vari kuberekerwa kunze kweroorano, vamwe kuvechiduku zvikuru. Vasikana vechiduku vakawanda vane vana vakati vakabva kuna vanababa vakasiyana-siyana. Mishumo inobva munyika yose inotaura nezvemamiriyoni evana vasina musha vanofamba-famba mumigwagwa; vakawanda vari kutiza misha inobata zvisakafanira kana kuti vanodzingwa nemhuri dzisati dzichagona kuvatsigira.
13. Zvinetsoi zvakapararira zvinotorera mhuri mufarwa?
13 Hungu, mhuri iri munjodzi. Mukuwedzera kune zvatodudzwa, kupanduka kwavechiduku, kubatwa zvisina kufanira kwavana, masimba masimba avakwanyina, udhakwa, uye zvimwe zvinetso zvinoparadza zvinotorera mhuri dzakawanda mufarwa. Nokuda kwenhamba huru yavana navakuru, mhuri haitongori nzvimbo yakachengeteka.
14. (a) Maererano navamwe, zvii zviri zvisakiso zvenjodzi yemhuri? (b) Rimwe Gweta romuzana ramakore rokutanga rakarondedzera sei nyika yanhasi, uye ipesvedzeroi iyo zadziko yaaya mashoko yakava nayo paupenyu hwemhuri?
14 Neiko kune njodzi yemhuri? Vamwe vanoti njodzi yemhuri yomuzuva razvino inoparirwa nokupinda kwavakadzi mumabasa. Vamwe vanonongedzera kukuputsika kwetsika kwanhasi. Uye zvisakiso zvokuwedzera zvinodudzwa. Anodokuva makore ane zviuru zviviri apfuura, rimwe gweta raisanozivikanwa rakafanotaura kuti dzvinyiriro dzakawanda dzaizotambudza mhuri, apo rakanyora, kuti: “Namazuva okupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika. Nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingaongi, vasati vari vatsvene, vasina rudo chairwo, vasingadi kuyanana, vanochera vamwe, vasingazvidzori, vane hasha, vasingadi zvinhu zvakanaka, vanonyengera, vasingarangariri, vanoita manyawi, vanoda zvinofadza zvenyika kupfuura Mwari.” (2 Timotio 3:1-4) Ndiani angapokana kuti aya mashoko ari kuzadzikwa nhasi? Munyika ine mamirire ezvinhu akadai seaya, kunombokushamisa here kuti mhuri dzakawanda dziri munjodzi?
15-17. Mubhuku rino, chiremerai chichanongedzerwa kwachiri sechine chakavanzika chomufarwa wemhuri?
15 Zano pamusoro penzira yokuwana nayo mufarwa mumhuri rinopiwa richibva munzvimbo iri yose. MuMadokero, mugove usingatongogumi wamabhuku nemagazini zvokuzviravira umene unopa zano. Chinetso ndechokuti vapi vezano vavanhu vanopokanidzana, uye riri zano razvino nhasi ringarangarirwa serisingashandi mangwana.
16 Ndokupi, ipapo, kwatinogona kutsvaka nhungamiro yemhuri yakavimbika? Eya, ungatarira kubhuku rakapedzwa makore 1 900 apfuura here? Kana kuti ungarangarira here kuti bhuku rakafanana nairori rinofanira kuva risingawirirani nomusi zvisina tariro yose? Zvokwadi ndeiyi, chakavanzika chaichoicho chomufarwa wemhuri chinowanwa mumanyuko akadaro chaiwo.
17 Manyuko iwayo iBhaibheri. Maererano noufakazi hwose, rakafuridzirwa naMwari amene. MuBhaibheri tinowana kutaura kunotevera: “Rugwaro rwose rwakafuridzirwa naMwari uye runobetsera nokuda kwokudzidzisa, nokuda kwokutsiura, nokuda kwokururamisa zvinhu, nokuda kwokuranga mukururama.” (2 Timotio 3:16, NW) Muchinyorwa chino tichakukurudzira kurangarira kuti Bhaibheri rinogona sei kukubetsera ku‘ruramisa zvinhu’ pakubata nedzvinyiriro nezvinetso zvakatarisana nemhuri nhasi.
18. Neiko kune mufungo kugamuchira Bhaibheri sechiremera mukupa zano muroorano?
18 Kana uchida kuramba kubvira kwokuti Bhaibheri rinogona kubetsera kuita kuti mhuri dzifare, rangarira izvi: Uyo akafuridzira Bhaibheri ndiye Muvambi wegadziriro yeroorano. (Genesi 2:18-25) Bhaibheri rinotaura kuti zita rake ndiJehovha. (Pisarema 83:18) Ndiye Musiki na‘Baba, uyo mhuri iri yose ine zita rayo.’ (VaEfeso 3:14, 15) Jehovha akacherekedza upenyu hwemhuri kubvira pamavambo orudzi rwomunhu. Iye anoziva zvinetso zvinogona kumuka uye akapa zano rokuzvipedza. Munhau yose, avo vakashandisa zvapachokwadi nheyo dzeBhaibheri muupenyu hwavo hwemhuri vakawana mufarwa mukuru zvikuru.
19-21. Ndizvakaitikai zvazvino uno zvinoratidza simba reBhaibheri rokupedza zvinetso zvemhuri?
19 Somuenzaniso, mumwe mukadzi anotarisira mhuri muIndonesia akanga ari mubhejeri akapindwa muropa. Kwamakore iye akaregeredza vana vake vatatu uye nguva dzose aipopotedzana nomurume wake. Ipapo akatanga kufunda Bhaibheri. Pashoma napashoma mukadzi wacho akasvika pakudavira icho Bhaibheri raitaura. Apo akashandisa zano raro, akava mudzimai ari nani. Nhamburiko dzake, dzakavakirwa panheyo dzeBhaibheri, dzakaunza mufarwa kumhuri yake yose.
20 Mumwe mukadzi anotarisira mhuri muSpain anoti: “Takanga taroorana gore rimwe bedzi apo takavamba kuva nezvinetso zvakakomba.” Iye nomurume wake vakanga vasina zvakawanda zvavaiitira pamwe chete, uye vaitaurirana zvishomanene kunze kwaapo vakanga vachiitirana nharo. Pasinei zvapo nokuva nomwanasikana muduku, vakasarudza kuwana paradzano yapamutemo. Ikoko kusati kwaitika, kunyange zvazvo zvakadaro, vakakurudzirwa kunzvera Bhaibheri. Vakafunda zano raro nokuda kwavarume navakadzi vakaroorana ndokuvamba kurishandisa. Nguva refu isati yapfuura, vaigona kukurukura norugare, uye mhuri yavo duku yakabatanidzwa nomufaro.
21 Bhaibheri rinobetsera vanhu vakurawo. Somuenzaniso, rangarira chakaitika chavamwe varoorani veJapan. Murume wacho aikurumidza kushatirwa uye pane dzimwe nguva aiva namasimba masimba. Kutanga, vanasikana vavaroorani vacho vakavamba kufunda Bhaibheri, pasinei zvapo nechishoro chavabereki vavo. Ipapo, murume akakumbanira vanasikana vake, asi mudzimai akapfuurira kuramba. Mukati memakore akapfuura, zvisinei, akacherekedza tapuro yakanaka yenheyo dzeBhaibheri pamhuri yake. Vanasikana vake vakamutarisira zvakanaka, uye murume wake akava munyoro zvikuru. Chinjo dzakadaro dzakasunda mukadzi wacho kuzvinzverera amene Bhaibheri, uye rakava netapuro imwe cheteyo yakanaka paari. Uyu mukadzi akwegura akataura ataurazve, kuti: “Takava varoorani chaivoivo.”
22, 23. Bhaibheri rinobetsera sei vanhu vemigariro yose yorudzi kuwana mufarwa woupenyu hwayo hwemhuri?
22 Ava vanhu vari pakati pavakawanda zvikuru vakadzidza chakavanzika chomufarwa wemhuri. Ivo vakagamuchira zano reBhaibheri uye vakarishandisa. Chokwadi, vanorarama munyika imwe cheteyo ine masimba masimba, unzenza, inotambudzwa mune zvemari somunhu ari wose zvake. Uyezve, ivo havana kukwana, asi vanowana mufarwa mukuedza kuita kuda kwoMuvambi wegadziriro yemhuri. Sezvinotaura Bhaibheri, Jehovha Mwari ndiye “unokudzidzisa zvinokubatsira, unokutungamirira panzira yaunofanira kufamba nayo.”—Isaya 48:17.
23 Kunyange zvazvo Bhaibheri rakapedzwa anodokuva makore ane zviuru zviviri apfuura, zano raro rinowirirana nomusi zvirokwazvo. Uyezve, rakanyorerwa vanhu vose. Bhaibheri harisati riri bhuku reAmerica kana kuti rokuMadokero. Jehovha “wakaita marudzi ose avanhu, achibva kune mumwe chete,” uye Anoziva mugadzirirwo wavanhu munzvimbo iri yose. (Mabasa 17:26) Nheyo dzeBhaibheri dzinoshanda nokuda kwomunhu ari wose. Kana ukadzishandisa, iwewo uchasvika pakuziva chakavanzika chomufarwa wemhuri.
UNOGONA HERE KUPINDURA IYI MIBVUNZO?
Chii chiri kuitika kumhuri nhasi?—2 Timotio 3:1-4.
Ndiani akatanga gadziriro yemhuri?—VaEfeso 3:14, 15.
Chii chiri chakavanzika chomufarwa wemhuri?—Isaya 48:17.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Pane Chakavanzika Chomufarwa Wemhuri Here?
fy chits. 1 pp. 4-12